Ny isan'andro: Reinventing Digital News | Martech Zone
Alakamisy Febroary 3, 2011 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Ho an'ny tanjon'ity bilaogy ity dia nivoaka aho ary nahazo iPad vaovao. Fantatro, fantatro… fialan-tsiny malemy io. Betsaka amin'ny ny mpanjifanay mametra-panontaniana momba ny iPad koa, na izany aza, ka tonga ny fotoana hitrandrahana lalina sy hahazoana mpivady hiasa.
Raha vantany vao tonga tany an-trano aho dia nisintona Isan'andro, Sehatra fampahalalam-baovao dizitaly Rupert Murdoch natao manokana ho an'ny iPad (nambara omaly). Ny traikefa dia miavaka ary tena mahavariana. Amin'ny maha bandy gazety taloha ahy dia ny fofon'ny fanontam-baovao ihany no tsy azoko.
Ireo endri-javatra dia fehezin'ny vaovao, ny horonan-tsary ary ny tranonkala - ary araraoty tanteraka ny fiasa mifandraika amin'ilay takelaka. Ny ankamaroan'ireo sary amin'ny publication dia mifandray, miaraka amin'ny horonan-tsary sy dokam-barotra tafiditra tsara. Tsy manelingelina, ny doka kosa dia ampahany amin'ny traikefa rehefa mifindra eo anelanelan'ny fizarana sy pejy ianao. Ny haben'ny dokambarotra dia manaparitaka ny teritery rehetra amin'ny fanaovana doka.
Ny Daily dia manana ny halaliny sy ny kalitaon'ny magazine fa aterina isan'andro toy ny gazety ary havaozina amin'ny fotoana tena izy toa ny tranonkala. Miaina velona ny tantara, sary, horonan-tsary, horonan-tsary sy sary mahafinaritra, arakaraka ny itendrenao, hikosehanao, hokisohanao ary hikarohanao. Ny fizarana fanatanjahantena namboarina dia ahafahanao manaraka ny naoty, sary ary ny lohatenin'ny ekipa tianao indrindra - na dia ny siokan'ireo mpilalao aza.
Ny zava-bitan'ny The Daily dia vaovao niainana manokana. Manosika ny mpanjifanay maro izahay hanao mihoatra ny tsotra manao ny tranokalan'izy ireo miasa amin'ny efijery finday sy takelaka. Raha te hampiasa tanteraka ireo fitaovana ireo dia mitaky faharanitan-tsaina bebe kokoa… fampidirana ny fijanonana, ny fikosehana, ny horonan-tsary ary ny fifandraisana hafa. Mila mpamokatra tranonkala iray izay mahatakatra tsara ny sehatra ary koa ny mpampiasa. (Eny, fantatray fa tsy nahavita azy io niaraka tamin'ny bilaoginay izahay… manohy manatanteraka izany izahay).
Zava-dehibe ho an'ny mpivarotra izany ary mitsoka ny fetran'ny mpampita vaovao izay nampiasainay taloha. Ny tranonkala tsotra Call-To-Action (CTA) mankany amin'ny pejy fiakarana mankany amin'ny andro fiovam-po dia isaina. Hofoanantsika ny faharetan'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fihetsika tsy mandeha sy antenaina. Ireo fitaovana ireo dia mahatonga ny famoahana traikefa miavaka tsy manam-petra… mila fitaovana vitsivitsy fotsiny isika hanatrarana!
Ny Daily dia azo alaina amin'ny alàlan'ny serivisy fisoratana anarana iTunes an'ny Apple ary amin'ny alàlan'ny iPad App Store $ 0.99 isan-kerinandro na $ 39.99 isan-taona. Tsy manana ahiahy aho fa hisoratra anarana rehefa vita ny fitsarana ahy!
Tags: vaovao ipadVaovaorupert murdochny isan'androny vaovao isan'andro
3 Mey 2011 tamin'ny 8:26 hariva
Doug, nanoratra ianao hoe: "Tamin'ny naha-bandy tranainy gazety ahy, ny fofona fanontam-baovao ihany no tsy azoko." Satria mampiasa ranomainty miorina amin'ny soja ny Indy Star, nisy fofonaina toy ny sakafo sinoa entina ve ny takelaka?
8 Mey 2011 tamin'ny 1:38 hariva
Amin'ny maha-bandy teknolojia ahy ahy manokana dia mandevona ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny elektronika aho, saingy mbola tiako ihany koa ny gazety printy tsara. Ho fanampin'izay, ho an'ny fofona, azoko ampiana ny lisitry ny fiasa miavaka dia ny fahatsapana taratasy eo anelanelan'ny rantsan-tànanao rehefa mamaky pejy ianao.
8 Mey 2011 tamin'ny 9:10 hariva
Tiavo ny interface, fa ny asa fanaovan-gazety dia mamela zavatra maro irina. Topazo maso ireo hevitra momba ny App Store izay raisin'ny The Daily. Mila milaza aho, miombon-kevitra amin'izy ireo aho.